Tai chi | Fitsaharana ara-pahasalamana
Fanatanjahan-tena ho an'ny vatana sy saina
Ny karazana vokatry ny Tai Chi
Betsaka ny olona manerantany no nahita ny kanton'ny hetsika Tai Chi ary mampihatra izany mba hampifanaraka ny sain'izy ireo, hifehezana ny fitarainana ara-batana, ho toy ny haiady nentim-paharazana na hisaintsainana.
Tai Chi - Ny niandohana
Tahaka ny fanao Far Atsinanana maro, ity dia heverina ho toy ny fanampiana mahasoa ary na safidy ho an'ny fitsaboana mahazatra aza. Fa inona marina moa ny Tai Chi, avy aiza izy io, ahoana ny fomba anaovana azy ary inona no ataony?
Tai Chi dia mety nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato faha-18. Tamin'izany fotoana izany, ny fianakaviana manan-danja rehetra ao Shina dia "nanana" ny haiady nataony, ny famonoana fomba sy ara-teknika izay nampianarina hatramin'ny taranaka fara mandimby, saingy nafenina toy ny tsiambaratelo avy any ivelany.
Manao fanazaran-tena ho an'ny vatana sy fanahy i Tai Chi - © ulza / Adobe Stock
Amin'ny maha-endrika fiofanana am-boalohany ny ady amin'ny sabatra dia zara raha misy i Tai Chi ankehitriny, fa ny tena mampanahy dia ny hampiroborobo sy hitazomana ny fahasalamana.
Hetsika - Ilay endrika
Ny filaharana feno ny hetsika dia antsoina hoe endrika. Eto dia maka toerana isan-karazany isan-karazany ilay olona ary manambatra azy ireo amin'ny fihetsehana mikoriana. Toy ny amin'ny yoga, ny toerana misy ny tsirairay dia manana anarana manokana, ary ny endrika iray dia mety ahitana toerana 140 haingana.
Elaela vao miditra anaty ny fizotrany manontolo, fa io koa dia toetra mampiavaka an'ity fanatanjahantena ity. Ny dia no tanjona, ary amin'ny faharetana sy faharetana no hahatongavanao any.
Ny tena majika an'i Tai Chi dia mitoetra ao amin'ny fikorianan'ny hetsika miadana sy mifantoka.
Ny fomba martial dia mbola ampiharina haingana dia haingana, fa amin'ny variant klasika kosa ny hery dia mitoetra am-pitoniana.
Ny fampiharana endrika dia manomboka amin'ny fihetsika mety. Mitsangàna, miaraka amin'ny lohalika somary miondrika, mijery mahitsy ary mihantona mihantona tanana, miangona ao an-tsainao ianao ary mahazo ny toe-tsaina mifantoka tanteraka amin'ny fahatsapanao ara-batana mandritra ny minitra vitsy manaraka. Ny fofonaina dia mivezivezy milamina sy mangina amin'ny vatana iray manontolo.
Soso-kevitra ny hisafidy ampahany mangina amin'ny andro sy toerana tsy misy korontana hanaovana fanazaran-tena. Na amin'ny valan-javaboary amin'ny hariva, amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na amin'ny maraina eo amin'ny terrasao ao an-trano - ny tena zava-dehibe dia ny fanelingelenana tsy mahafinaritra sy ny antony manakorontana dia lavitra.
Mazava ho azy fa afaka mampianatra ny tenanao endrika iray na maromaro amin'ny boky ianao, fa ny fampiofanana miaraka amin'ny mpampianatra efa za-draharaha dia manampy ny vao manomboka indrindra handresy ny fisalasalana. Ankoatr'izay, ny fihetsika ratsy dia tsy mitroka akory; hainao haingana kokoa ny fahatsapana hoe "marina".
Ny fampiasana tsy tapaka ny fampihetseham-batana Tai Chi dia misy fiantraikany misoroka sy manasitrana amin'ny zavamananaina iray manontolo. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny vanim-potoana fampiofanana mitohy, ny fivezivezena, ny fahaiza-mamerina, ny fahatsapana fifandanjana sy ny fandevonan-kanina. Rava ny fihenjanana, mihombo ny gadona ary ny gadona torimaso ary milamina ny fahatoniana anaty ao anatiny.
Tai Chi dia mety hisy vokany fanasitranana goavambe, indrindra amin'ny toe-java-manahirana iraisana sy fikorontanan'ny simia amin'ny vatana, raha ampiasaina amin'ny fitarihana marina izany. Soa ihany fa tsy misy fetran-taona ho an'ity karazana fampihetseham-batana ity, ary irina raha, any amin'ny tontolo andrefana, ny fampiharana tsy misy hatahorana ho an'ny daholobe dia raharaha mazava ho azy eo amin'ny fiainana andavanandro.
Mitadiava fitsaharana - fahasalamana
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 9. September 2020 15. Jolay 2021 Sokajy LifestyleKeywords fisaintsainana, meditieren, Tai-Chi
indray Lahatsoratra taloha: Zana-tsipìka | fanatanjahan-tena
more Lahatsoratra manaraka: Mazava ho azy miaraka amin'ny kosmetika voajanahary | Fahasalamana ara-batana